‘व्यवसायमुखी समाजसेवा गरिरहेका छौं’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘व्यवसायमुखी समाजसेवा गरिरहेका छौं’
‘व्यवसायमुखी समाजसेवा गरिरहेका छौं’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 16, 2018	0 5088 Views
प्याब्सन दाङका अध्यक्ष
नयाँ शै क्षिक सत्र २०७५ शुरु भएर नियमित पठनपाठन शुरु भइसके को छ । सरकारले दो स्रो चरणको भर्ना अभियान पनि सकिसके को अवस् थामा ने पालको शै क्षिक क्षेत्रमा टे वा पु¥याइरहे को संस् थागत विद्यालयहरुको संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजे शन (प्याव्सन) का अध्यक्ष यादव गिरीसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले भर्ना अभियान र शै क्षिक स् िथति र बे थितिका विषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
यसपालि कति नया विद्यार्थी भर्ना गर्नुभयो ?
वास् तविक तथ्यांक अझै आइपुगे को छै न । तर पूर्व भालुबाङदे खि पश्चिम हापुरे सम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार दशहजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । जिल्लामा संस् थागत विद्यालय दुई सय २५ छन् र त्यसमा प्याव्सनअन्तर्गत एक सय ५८ विद्यालयमा दश हजार नया विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् ।
शुल्क त साह्रै महंगो लिनुभयो नि है ?
फि महंगो भयो भन्ने कुरा सदावहारजस् तै भइसक्यो  । मान्छे ले खो ट लगाउनकै लागि पनि महंगो फि लियो भन्ने प्रवृत्ति बढे को जस् तो मलाई लागे को छ । यथार्थमा संस् थागत विद्यालयमा के ही अपवाद बाहे क फि महंगो लिइएको छै न । म संस् थागत विद्यालयमा प्रवे श गरे दे खि नै यस् ता रे डिमे ड गुनासा सुन्दै आइरहे को छु । अहिले पनि सरकारले प्रतिविद्यार्थी १८ हजार लगानी गरिरहे को छ तर संस् थागत विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी ११÷१२ हजार प्रतिवर्ष लगानी हुने गर्छ । अब तपाइ‘ आफै भन्नुस् कसले महंगो लिइरहे को छ वा खर्च गरिरहे को छ । हामीले त यहा“को भू–बनो ट, अभिभावकको क्रयशक्ति, व्यावहारिकता सबै लाई हे रे र निर्धारण गरिएको छ । शुल्क महंगो लिइएको छै न ।
चकोर् शुल्क लिए भने र तपाइहरुकै कार्यालयमा तालाबन्दी भएन र ?
विद्यार्थीहरुले ३० प्रतिशत शुल्क बृद्धि भयो भने र हामीमाथि मिथ्या आरो प पनि लगाए । समग्रमा हे नेर् हो भने यसपालि १० प्रतिशत मात्रै शुल्क बृद्धि गरिएको हो  । बजार मूल्य, महंगीलगायत प्राकृतिक नियमले पनि १०/१५ प्रतिशत शुल्क बृद्धि गनेर् कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्रै पर्छ र यो स् वाभाविक नै हो  । शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलव पनि हे र्नुप¥यो  । त्यसै ले अहिले भएको शुल्क बृद्धि सामान्य नै हो  । तर तपाइहरुले भने जस् तो ३० प्रतिशत शुल्क कतै बढे को छ भने त्यो ज्यादति हो तर हामीले यसपालि शुल्क बृद्धि हो इन, समायो जन गरे का छौ ं ।
विद्यार्थीहरुसग के सहमति गर्नुभयो त ?
विद्यार्थी संघसंगठनहरुसग पनि बस् यौ  । उहाहरुसग बस्दाखे री हामीले उहा“हरुले शुल्क आप्mनो हिसावले तय गर्नुभयो भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो  । हामीले त्यस् तो गरे कै छै नौ ं । विद्यालय व्यवस् थापन समितिले निर्णय गरे र शुल्क अनुमो दन गनेर् हो  । शै क्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै निर्णय हुन्छ र त्यो निर्णय अनुमो दनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाइन्छ । शिक्षा कार्यालयले अनुमो दन गरिदिएन भने हाम्रो के लाग्छ र । यसपालि नया“ संरचना आएको छ । स् थानीय तहले गनेर् कि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गनेर् यो विषयमा त्यतिबे ला अलि अन्यौ ल नै रह्यो  । त्यसै ले गर्दा नै के ही विद्यालयहरुले निर्णय नपठाएको भए कमजो री भएको हुनसक्छ । नत्र अधिकांश विद्यालयले विद्यालय व्यवस् थापन समितिबाट निर्णय गराएको शुल्कको कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै अनुमो दन गराएर लागु गरे को अवस् था छ । विद्यालय व्यवस् थापन समितिबाट निर्णय तथा अनुमो दन गराउनु भने कै अभिभावकले अनुमो दन गरे को हो । स् थानीय जनप्रतिनिधिले अनुमो दन गरे को हो र शिक्षा कार्यालयले पनि । त्यसै ले यो मनो मानी भन्ने छै न र हुदै न पनि ।
विव्यस पनि नाम मात्रै को भो , काम चाहि सञ्चालकले गर्छन् रे नि ?
त्यसो हो इन । समान्यतयाः व्यवस्थापन समितिमा सञ्चालकहरुबाट एकजना, विद्यालय निरीक्षक पदे न सदस् य, अभिभावकबाट दुईजना मनो नित सदस् य, शिक्षकको प्रतिनिधि एकजना र स् थानीय तहले सिफारिस गरे को एकजनासमे त सातजना रहने व्यवस्था छ । त्यसै लाई हे र्दा मात्रै बुझिन्छ कि त्यहा“ सञ्चालकको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, अभिभावकको पनि, जिल्ला शिक्षा, शिक्षक, स्थानीयतह सबै को प्रतिनिधित्वबाट बने को समिति कहाबाट मनो मानी हुन्छ ? यो त हुनै सक्दै न । कुनै –कुनै विद्यालयमा समिति क्रियाशील नभएको हुनसक्छ । किनभने म सबै ठाउ“मा सहीसलामत छ भन्ने पक्षमा छै न । के ही अपवाद हो लान् पनि तर अपवादका विषयलाई लिएर सिंगो संस्थागत विद्यालयलाई मुछ्नुहुदै न भन्ने हाम्रो भनाइ हो  ।
निदेर्शिका अनुसार संस् थागत विद्यालय चले को दे खिदै न त ?
संस्थागत विद्यालय निदेर् शिका अक्षरशः पालना गनेर् हो भने दाङमा कुनै पनि संस् थागत विद्यालय रहदै नन् । चल्दै नन् । त्यो राज्यले जबर्जस् ती ल्याएको पो लिसी हो  । तर पनि त्यो निदेर् शिका मान्दै नांै भने र हामीले भन्न खो जे को हो इन, तर हाम्रो माग के हो भने यो निदेर् शिका आइसके पछि कम्तिमा हामीजस् ता सरो कारवालाहरुलाई राखे र त्यो नीति बनाएको भए शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्थ्यो  । त्यो निदेर् शिकामा के ही त्यस् ता विषयहरु छन् जुन विषयवस् तुलाई संस् थागत विद्यालयहरुले कहिल्यै लागु नै गर्न सक्दै नन् । त्यो लागु गनेर् हो भने विद्यालयहरु दिगो रुपमा सञ्चालन नै हुन सक्ने अवस् था छै न । तर पनि राज्यले ल्याएको नीति हो । हामीले के ही मानिआएका पनि छौ ं । अकोर् कुरा यो निदेर् शिकालाई लिएर सांगठनिक लडाइ“हरु पनि छन्
हाम्रा । जतिबे ला सरकारले संस् थागत विद्यालय निदेर्शिका जारी ग¥यो त्यतिबे ला हामीले यो –यो विषयमा हाम्रो असहमति छ पनि भने का थियौ ं । के ही असहमतिका विषयमा राज्यले संशो धनमार्फत सुनुवाइ पनि गरे को छ । सुस् त–सुस् त राज्यले पनि बुझ्छ जस् तो मलाई लागे को छ कि संस् थागत विद्यालयका पनि समस् या छन् भन्ने कुरा ।
तर तपाइहरुले नै माने को छात्रवृत्तिको व्यवस् था त पारदर्शी गर्नुभएन त ?
१० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस् था भए पनि विद्यालयहरुले त्यो भन्दा धे रै दिएको अवस् था अहिले पनि छ । मात्रै हामीले डकुमे न्टे शन गर्न नसके को मात्रै हो  । अभिभावकको दुःख पीडा हे रे र, सुने र विद्यालयले छात्रवृत्ति दिने गरे को अवस् था अहिले पनि छ तर त्यही मापदण्डका दे खाउ भन्दा डकुमे न्टे शन नभएको मात्रै हो  ।
तीनजना भर्ना हुुदा एकलाई निःशुल्क भने र व्यापार गनेर् अनि छात्रवृत्ति भन्न पाइन्छ ?
त्यो पनि छात्रवृत्ति नै हो  । जसको आर्थिक विपन्नता छ उसै लाई छुट दिने गरिएको हो । यद्यपि यो व्यवस् था हटिसके को अवस् था छ । हिजो का दिनहरुमा थियो  । कसै ले कतै दिएको भए अपवाद हो ला, नत्र सवै ले हटाइसके  । अहिले त छात्रवृत्तिका लागि निवे दन माग गरे को छ । छात्रवृत्ति कार्यविधि ०७४ कै ढाचामा रहे र हामीले आवे दन आह्वान गरे का छौ ं । निवे दन आएपछि मात्रै छात्रवृत्ति समितिले पास गरे पछि मात्रै हामीले छात्रवृत्ति वितरण गनेर् छौ ं । त्यसै ले अपारदर्शी छ भन्ने कुरा अब छै न ।
भौ तिक पूर्वाधारकै कतिपय ठाउमा विजो ग छ त ?
प्याव्सन न अनुगमन गनेर् निकाय हो न त नियमन गनेर् निकाय नै हो  । खाली सांगठनिक हकहितका लागि काम गनेर् निकाय हो  । तर हामीले भन्ने गरे का छौ ं कि तपाइहरुले दिने शिक्षा, भौ तिक से वा र सुविधाहरु अपग्रे ड गदैर् जानुपर्छ । नत्र आउटडे टे ड हुने हो  । हामी त के चाहन्छांै भने अनुगमन र नियमन गनेर् निकायले नियमित यो काम गरिदे ओ स् भन्ने नै हो  । बिडम्बना घो राही उपमहानगरपालिकाबाट पहिलो पटक अनुगमन भएको छ । त्यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
तपाइहरु आफै ले गनेर् काम त गर्नु भएको छै न । शिक्षकहरुले नै आधा खाएर काम गर्नुपनेर् बाध्यता छ ?
शिक्षक, कर्मचारीको सन्दर्भमा हामी हायर एण्ड फायरकै सिद्धान्तमा काम गरिरहे का छौ ं । राम्रो काम गनेर् हरुले राम्रै से वा सुविधा पाउनुपर्छ र राम्रो गर्न नसक्ने ले विदा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो  । तर प्याव्सन अन्तर्गतकै विद्यालयमा पनि ग्रामीण क्षे त्रहरुमा कम शुल्क लिएर कम सुविधा दिने काम भएको हो ला । फि पनि धे रै लिने र से वासुविधा पनि दिने हरु पनि हुनुहुन्छ । शिक्षकको तलव निर्धारण भने को त्यो विद्यालयले लिने शुल्कले निर्धारण हुन्छ । सामान्यतयाः ६०÷४० को सिद्धान्तमै काम गरिन्छ । विद्यालयले लिने शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारीको तलवमा खर्चिने र बा“की ४० प्रतिशत विद्यालय व्यवस् थापनमा खर्चिने गरिन्छ । जसले पै सा उठाउनु भएको छ उहा“हरुले तलव पनि दिनुभएको छ, तर जहा“ तलव कम दिनुभएको छ त्यहा शुल्क पनि थो रै लिनुभएको छ । कतै शुल्क उठाएर पनि तलब नदिएको भए त्यो पनि ज्यादति नै हो  । कतिपय विद्यालयमा त शतप्रतिशत रकम शिक्षकको तलबमा खर्चिएको पनि छ ।
दाङको शिक्षाको गुणस् तर सुदृढ गर्न के गर्नुपर्ला ?
शिक्षाको नया“ ट्रे न्ड ल्याउ“ भन्ने मा हामी व्याव्सनकर्मीहरु छौ ं । कम्तिमा हामीले उत्पादन गरे का विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिस् पर्धा गर्न सकून् । त्यसलाई सबै ले आत्मसात गर्नुपर्छ । पछिल्लो अवस् थामा हामीहरुले रिसर्च वे सलाई ध्यान दिएका छौ ं । दाङमा मन्टे श्वरी विधि पनि त्यति सक्से स हुन सके न । त्यसै ले हामीले मन्टे श्वरी प्लस परम्परागत शिक्षण विधिको फ्युजन गरे र के ही नया“ उपलव्धि निकाल्ने प्रयासमा लागे का छौ ं । त्यस् तै कक्षा ३ दे खि सात कक्षासम्म प्रो जे क्ट वे स अध्यापन भइरहे को छ । त्यो भन्दा माथि हे नेर् हो भने रिसर्च वे समा हामीले शिक्षाको गुणस् तरलाई कायम गनेर् प्रयास गरिरहे का छौ ं । अबको शिक्षा भने को अनुसन्धानमूलक हुनुपर्छ भन्ने हो  ।
अन्त्यमा, शिक्षामा व्यापार कति ? से वा कति ?
शिक्षामा व्यापार यति र से वा यति भन्नै मिल्दै न । हामी त व्यापार नै हो इन से वा गरिरहे का छौ ं भन्ने हो  । तर ने पाल सरकारले कम्पनी ऐ नअनुसार विद्यालय सञ्चालन गनेर् भनिसके पछि त्यो परिभाषाले हामीलाई व्यापारी भने पनि हुन्छ । तर हामी व्यवसायमुखी समाजसे वाको काम गरिरहे का छौ ं । समाजलाई चे तना विस् तार गदैर् समाज रुपान्तरणको काम गरिरहे का छौ ं ।
Previous: तेब्बर गिट्टी, बालुवा अनाधिकृत
Next: पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिन माग